Diyaaradda Southwest Airlines ayaa bilawday baadhitaanka duuliyaha aflagaadada ah ee Biden
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Southwest Airlines ayaa bilawday baadhitaanka duuliyaha aflagaadada ah ee Biden
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Diyaaradda Southwest Airlines ayaa bilawday baadhitaanka duuliyaha aflagaadada ah ee Biden.
Balanqaadkii Koonfur Galbeed ee ahaa in ay si toos ah wax uga qabato xaaladda shaqaalaha la hadal hayo, ka dib baaritaan gudaha ah, waxa ay dhalisay diidmo kale oo dheeraad ah iyo dalabaad ka sii xoog badan iyo tallaabo la taaban karo.
Koonfur Galbeed ma ogola Shaqaaluhu inay wadaagaan fikradahooda siyaasadeed marka ay shaqada ku jiraan u adeegaya macaamiisha.
Qaar ka mid ah ayaa ugu baaqay maamulka duulista hawada ee dowladda federaalka in ay ka qeyb qaataan oo ay hubiyaan caafimaadka maskaxda ee duuliyaha.
Shirkaddu waxay sidoo kale lahayd qaybteedii saxda ahayd ee dhaleeceynta ka timid konserfatifyada, ee lagu eedeeyay "inay u hoggaansameen kooxda garabka bidix."
Kelmad fayras ah oo loo adeegsaday in lagu aflagaadeeyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kicisay baaritaan gudaha ah oo ay sameysay shirkadda diyaaradaha ee Koonfur-galbeed.
Shirkadda fadhigeedu yahay Dallas ayaa ku dhawaaqday in ay bilowday baadhitaan gudaha ah ka dib markii mid ka mid ah duuliyayaashiisa uu ku saxeexay weedha 'Let's Go Brandon' in kastoo codbaahiyaha.
"Koonfur galbeed ma ogola in shaqaaluhu ay wadaagaan ra'yigooda siyaasadeed marka ay shaqada ku jiraan u adeegaya macaamiisheena, hal aragti oo shakhsi ah oo shaqaale ah waa in aan loo fasirin aragtida Koonfur Galbeed iyo guud ahaan 54,000 Shaqaale," Southwest Airlines ayaa lagu yiri bayaan shalay.
Muranka ayaa ka dhashay wararka sheegaya in duuliye saarnaa a Southwest Airlines Duulimaadka ka yimid Houston, Texas kuna sii jeeday Albuquerque, New Mexico Jimcihii wuxuu yidhi, 'Aan tagno Brandon' in kastoo cod-baahiyaha - meme muxaafid ah oo garabka midig dhawaan ah kaas oo noqday koodhka fisqiga ee lagu hagayo Dimuqraadiga hadda jira. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Sida uu sheegayo wariyaha AP Colleen Long, oo ku dhacday diyaaradaas, waxa ay ku dhawaatay in laga saaro kadib markii ay isku dayday in ay waydiiso duuliyaha wax ku saabsan isticmaalka weedha.
Jawaabta ay shirkadu ka bixisay dhacdadan oo u muuqatay mid liidata ayaa dad badan ku baaqay in duuliyaha si cad loo sheego oo shaqada laga eryo, halka qaar kalena ay ku baaqeen in la qaadaco guud ahaan shirkadda. Qaarkood waxay aadeen ilaa inay is barbar dhigaan dhawaaqyada ka soo horjeeda Joe Biden iyo ku dhawaaqida daacadnimada argagixisada.
Qaarkood waxay xitaa ugu baaqeen Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka inay ka qayb qaataan oo ay hubiyaan caafimaadka maskaxda ee duuliyaha.
Diyaaradda Southwest sidoo kale waxay lahayd saamigeeda saxda ah ee dhaleeceynta muxaafidka, ee lagu eedeeyay "inay u baqeen kooxda garabka bidix."
Prof. Dea Mallin wuxuu leeyahay,
Nofeembar 1, 2021 at 17: 17
Digniin! Qaladka higaada!
Mid ka mid ah maqaallada ku jira cadadkan, tafatirahaagu waxa uu qalday kelmadda, “brouhaha.”
Kani waa erey Faransiis ah oo macnihiisu yahay "fuss.
Tafatirahaagu wuxuu higgaadiyay ama oggolaaday in lagu qoro "bruhaha" taas oo aan suurtogal ahayn Faransiis.